चितवनकी संक्रमित महिला निको भएर खुशी हुँदै घर फर्किइन् ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more चितवनकी संक्रमित महिला निको भएर खुशी हुँदै घर फर्किइन् !
चितवनकी संक्रमित महिला निको भएर खुशी हुँदै घर फर्किइन् !
बैशाख ३१ गते, २०७७ - १६:०९
अस्पतालका तर्फबाट बिदाइ गर्दै फूल, गुच्छा र डिस्चार्ज दिएपछि खुशी हुँदै आमाले आफूलाई कोरोना भएको भनिए पनि शरीरलाई भने केही नभएको बताइन् । उनले भनिन्, “एकदमै राम्रो छ । आउँदा पनि यस्तै थियो अहिले पनि त्यस्तै छ ।” उनले थपिन्, “सबैले मलाई कोरोना भयो भने मलाई त केही पनि भएको छैन ।”
अस्पतालको सेवाप्रति उनी निकै खुशी हुँदै नियमित रेखदेखमा रहेका नर्सिङ कर्मचारीलाई उहाँले विशेष धन्यवाद दिइन् । बिदाइ गर्दै अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारीले उनलाई शुभकामना दिइन् । स्वास्थ्यको ख्याल गर्न अधिकारीको सुझाव थियो । प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा श्रीराम तिवारीले दुई सातासम्म घरमा छुट्टै बस्न अनुरोध गर्दै केही असजिलो भए अस्पताल आउन आग्रह गरिन् ।
कोरोना जितेर फर्कँदै गरेकि आमाको बिदाइमा मेडिसिन विभाग प्रमुख डा प्रकाश खतिवडा, कोरोना क्लिनिकल संयोजक डा प्रमोद पौडेल, मेट्रोन शान्ता भण्डारी, सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेल, आइसोलेसन विभाग प्रमुख रुमा देवकोटालगायतको उपस्थिति थियो । यसअघि २७ वर्षीय छोराले सङ्क्रमणमुक्त भएपछि अस्पताललाई धन्यवाद दिएका थिए । आज पनि उनले त्यसैलाई दोहो¥याएर आमासँगै घर फर्किएका हुन् ।
बैशाख ३१ गते, २०७७ - १६:०९ मा प्रकाशित